४ देशबाट करिब ६६ करोडको विद्युतीय गाडि आयात, राज्यले कति पायो कर ? - Arthatantra.com
४ देशबाट करिब ६६ करोडको विद्युतीय गाडि आयात, राज्यले कति पायो कर ?
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ६५ करोड ७८ लाख ४३ हजार रुपैयाँको विद्युतीय कार, जीप तथा भ्यानको आयात भएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार असार मसान्तसम्ममा ४ वटा देशबाट ६५ करोड ७८ लाख ४३ हजार रुपैयाँको २४९ थान कार, जीप तथा भ्यान आयात भएको हो । उक्त साना विद्युतीय सवारी साधन आयात हुँदा राज्यले ३४ करोड २ लाख ९८ हजार रुपैयाँ राजस्व पाएको छ ।
विद्युतीय कार, जीप, भ्यान चीन, भारत, दक्षिण कोरिया र अमेरिकाबाट आयात भएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार असार मसान्तसम्म चीनबाट १४०, दक्षिण कोरियाबाट ७१, भारतबाट २५, अमेरिबाट १३ वटा गाडि आयात भएको छ ।
जेठ महिनामा पनि अमेरिकाबाट १३ वटा गाडि आयात भएको थियो । असार महिनामा भने अमेरिकाबाट यो महिना कुनै पनि गाडि आयात नभएको देखिएको छ ।
विभागका अनुसार भारतबाट १०० किलोवाटसम्मको ३ करोड ८७ लाख ८ हजार रुपैयाँको २५ थान गाडि आयात भएको छ । १०० किलोवाटसम्मको ८ करोड ६ लाख ६८ हजार रुपैयाँको ७६ वटा गाडि आयात भएको देखिएको छ ।
यस्तै चीनबाट १०० देखि १५० किलोवाटसम्मको ११ करोड १२ लाख ४४ हजारको ३८ वटा, १५० देखि २०० किलोवाटसम्मको २ करोड ३५ लाख ३५ हजार रुपैयाँको विद्युतीय गाडि आयात भएको छ ।
यस्तै दक्षिण कोरियाबाट १०० किलोवाटसम्मको ६ करोड ६१ लाख ८७ हजार रुपैयाँको १९ वटा, ५० देखि १०० किलोवाटसम्मको २ करोड ५० लाख ७६ हजारको ७ वटा र १५० देखि २०० किलोवाटसम्मको २० करोड ५८ लाख ६१ हजार रुपैयाँको ४५ वटा साना विद्युतीय सवारी साधान आयात भएको छ ।
विभागका अनुसार अमेरिकाबाट १०० देखि १५० किलोवाटसम्मको ५ करोड ५२ लाख २३ हजार १३ वटा साना विद्युतीय सवारी साधान आयात भएको छ ।
वि.सं.२०७८ साउन १० आइतवार १३:३५ मा प्रकाशित
अघिल्लाे फेरि सस्तियो सुनचाँदीको मूल्य, आज प्रतितोलामा कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
पछिल्लाे खल्तीले ल्यायो मोबाइल टपअपमा नेपालकै सबै भन्दा बढी क्यास ब्याक अफर, कति पाइने ?